တစ်ဦးက Labuan ဖောင်ဒေးရှင်းမှတစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူသီးခြားဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအခြေခံအုတ်မြစ်မဆိုအပျသညျဟုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဂုဏ်သတ္တိများစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီးကုသိုလ်ဖြစ်သို့မဟုတ် Non-ကုသိုလ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
• Labuan ဖောင်ဒေးရှင်း 2010 ၏အက်ဥပဒေ
• 2010 ၏ Labuan ဘဏ္ဍာရေးန်ဆောင်မှုများနှင့် Securities မှအက်ဥပဒေ
• 2010 ၏ Labuan အစ္စလာမ့်ဘဏ္ဍာရေးန်ဆောင်မှုများနှင့် Securities မှအက်ဥပဒေ
Labuan ကျွန်း Sabah ၏မလေးရှားပြည်နယ်ကနေကမ်းလွန်အရှေ့မလေးရှားတည်ရှိပြီးမလေးရှားတစ်ဦးပိုင်နက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏အရာရှိတဦးကအမည် "Labuan ၏ဖက်ဒရယ်နယ်မြေတွေကို" ဖြစ်ပါတယ်။ မလေးရှား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ပြုလုပ် 1848 ထံမှ 1946 သည်အထိဗြိတိသျှကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်ဦးက Labuan Foundation မှအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်ပင်:
• နိုင်ငံခြားရေးပါဝင်လာခြင်းဖြည့်စွက်: နိုင်ငံခြားသားများကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်တည်ရှိပြီးပြည့်စုံနိုင်ငံခြားတည်ထောင်သူ, အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူရိုးအမြစ်ကိုဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ပါတယ်။
• အနိမ့်အခွန်: အများဆုံးအခွန်လက်ရှိအချိန်တွင်သာ $ 6,600 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်ချက်: အမေရိကန်အခွန်ထမ်းအပေါင်းတို့နှင့်တကွအခြားသူများကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအပေါ်ဝင်ငွေအခွန်ပေးဆောင်ခြင်းဟာသူတို့ရဲ့အစိုးရများအားလုံးကိုဝင်ငွေကြေညာရမယ်လို့။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: တည်ထောင်သူ, အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ, အရာရှိများနှင့်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များ၏အမည်များအများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ထည့်သွင်းဘယ်တော့မှနေကြသည်။
• အစာရှောင်ခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်း: တစ်ဦးကအခြေခံအုတ်မြစ်နှစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်အတွင်း created နှင့်မှတ်ပုံတင်နိုငျသညျ။
• ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း: ကျင်းပတိုင်းပိုင်ဆိုင်မှုအခြေခံအုတ်မြစ်ကပိုင်ဆိုင်သည်။ တည်ထောင်သူနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ '' အကြွေးပိုင်ဆိုင်မှုသိမ်းယူလို့မရပါဘူး။
• အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်း: တိုင်းပုဂ္ဂလိကအခြေခံအုတ်မြစ်လိုပဲ, သူတို့ကစမ်းနှင့်အမွေဆက်ခံဥပဒေများမှတဆင့်သွားစရာမလိုဘဲသူတို့ရဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ (အမွေခံ) ၏အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်မှပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်သွားရှာကြံချမ်းသာကြွယ်ဝမိသားစုများအတွက်စုံလင်သောအိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအဆောက်အဦများဖြစ်ကြသည်။
• အင်္ဂလိပ်: Labuan အင်္ဂလိပ်ယင်း၏အရာရှိတဦးကဘာသာစကားများတစ်ဦးသည်အဘယ်မှာရှိဟောင်းတစ်ဦးကဗြိတိသျှကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်ဦးကအခြေခံအုတ်မြစ်တူညီသည်သို့မဟုတ်နီးကပ်စွာ Labuan အတွက်ဥပဒေရေးဆိုင်ရာ entity ရဲ့နာမညျကိုပုံနဲ့တူတဲ့အရာအမည်မရွေးချယ်နိုင်ပါ။
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရှားဖို့စကားလုံး "ဖောင်ဒေးရှင်းက" နဲ့အဆုံးသတ်ရပေမည်။
တိုက်မြစ်မှတ်ပုံတင်ရန် Applications ကိုတစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့အတွင်းရေးမှူးကကြေညာချက်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်များအတွက် Labuan ဖောင်ဒေးရှင်း 2010 ၏အက်ဥပဒေ (LFA) အရမွေးစားပုံစံများကို အသုံးပြု. ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူတင်သွင်းနေကြသည်။ အဆိုပါတည်ထောင်သူ၏အမည်များ, အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ, အရာရှိများနှင့်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှု၏ဖော်ပြချက်အများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။
ရိုးအမြစ်ကို '' အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသဘောတူထားသောဥပဒေများထက်ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်သူတွေကိုအောက်မှာထွက်သယ်ဆောင်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်အုပ်ချုပ်ခွင့်စာရွက်စာတမ်းများင်း၏ပဋိညဉ်စာတမ်းနှင့်ဆောင်းပါးများဖြစ်ကြသည်။
တိုက်မြစ်ကိုလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်တရားဝင် entity က "တည်ထောင်သူ" ဟုခေါ်သည်။ တည်ထောင်သူနိုင်ငံသားများဖြစ်နှင့်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ တည်ထောင်သူစာရေးဆရာပဋိညဉ်စာတမ်းနှင့်အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်များကိုဖော်ပြရန်ဆန္ဒရှိသလောက်သမ္မာသတိအသုံးချဖို့ဆောင်းပါးတွေ, ကနဦးပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်မည်သို့အနာဂတ်ပိုင်ဆိုင်မှု, ပိုင်ဆိုင်မှု၎င်းတို့၏အခွင့်အရေးများအပါအဝင်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများလှူဒါန်းခဲ့သည်နှင့်မည်သို့မည်ပုံအခြေခံအုတ်မြစ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အုပ်ချုပ်နေသည်လိမ့်မည်။
ရိုးအမြစ်ကိုတစ်ကောင်စီ၎င်း၏အရာရှိများနှင့်အတွင်းရေးမှူးကစီမံခန့်ခွဲရသည်။ အဆိုပါကောင်စီသည်၎င်း၏မန်နေဂျာ၏ယေဘုယျကြီးကြပ်ပေးသည်နှင့်၎င်း၏စင်းလုံးငှား, ဆောင်းပါးများနှင့်ပညတ္တိကျမ်းလိုအပ်အဖြစ်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံကြောင်းသေချာ။ ကောင်စီဒါရိုက်တာတစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ဆင်တူသည်။
အရာရှိများစစ်ဆင်ရေးစေ့နေ့နေ့ကိုသေချာစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာဖြည့်ဆည်း။ အရာရှိတည်ထောင်သူတစ်ခုသို့မဟုတ်အကျိုးခံစားခွင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကောင်းစွာ, အရာရှိများမဖြစ်နိုင်ပါ။
အဆိုပါအတွင်းရေးမှူး Labuan ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအုပ်ချုပ်ရေး (FSA) နဲ့လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများဖြည့်စွက်အပါအဝင်အားလုံးအတွင်းရေးမှူးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်တယ်။
တိုင်းအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုတည်ထောင်သူ, အရာရှိများ, အတွင်းရေးမှူးနှင့်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များကသင့်လျော်သောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် Labuan FSA ရဲ့ "Fit နှင့်လျော်သောပုဂ္ဂိုလ်လိုအပ်ချက်များအပေါ်လမ်းညွှန်ချက်များ" ကိုအညီအားလုံးအချိန်များတွင်မိမိတို့၏ရာထူးကျင်းပရန်မထိုက်မတန်ဖြစ်ကြောင်း။ အာမခံပေးရမည်
ထို့အပြင်ခုနှစ်, တိုင်းအခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှု 2001 ၏ Anti-အကြမ်းဖက်မှုဘဏ္ဍာရေးအက်ဥပဒေနှင့် 2001 ၏ Anti-ငွေတာဝန်အက်ဥပဒေနှင့်အတူလိုက်နာမှုသေချာပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါအရာရှိ (s) ကိုအခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုကောင်စီကိုခနျ့အပျနိုငျသညျ။ အဆိုပါကောင်စီပဋိညာဉ်စာတမ်းကိုနှင့် LFA ဥပဒေနှင့်အလိုက်နာမှုသေချာ။ ထို့အပြင်ကောင်စီကအခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့အရာရှိများနှင့်အခြားစီမံခန့်ခွဲမှုပုဂ္ဂိုလ်များကြီးကြပ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
ကျင်းပအားလုံးရန်ပုံငွေများနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများ (ပိုင်ဆိုင်မှု) ကိုအခြေခံအုတ်မြစ်ကပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုများသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများ (အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ) အကြိုးခံစားဖို့စင်းလုံးငှားနှင့်ဆောင်းပါးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူလိုက်နာနိုင်ရန်အတွက်ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ထိုသို့သောပိုင်ဆိုင်မှုများကို Non-မလေးရှားဖြစ်ရပါမည်။
အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများကိုသဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ပဋိညဉ်စာတမ်းနှင့်ဆောင်းပါးများအကျိုးခံစားရဖြစ်ကြသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အကြိုးခံစားခှငျ့နှင့်အခွင့်အရေးများကိုသူတို့အပိုင်အဘယ်သူသည်သတ်မှတ်။ အဆိုပါဥပဒေအရအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများပိုင်ဆိုင်မှုမှမွေးရာပါအခွင့်အရေးများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်တာဝန်များကိုအကြွေးမထားပေ။ သို့သော်ပဋိညဉ်စာတမ်းနှင့်ဆောင်းပါးများပုံမှန်အားဖြင့်အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမှအချို့သောအခွင့်အရေးများကိုပေးကောင်စီ, အရာရှိများနှင့် / သို့မဟုတ်အတွင်းရေးမှူးထံမှအချို့သောကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်လုပ်ငန်းတာဝန်များပေးနိုငျသညျ။
(တဦးတည်းအဖြစ်ခန့်အပ်လျှင်) အားလုံးမှတ်တမ်းများကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များ, အရာရှိများ, အတွင်းရေးမှူး, စီမံခန့်ခွဲမှုထမ်းများနှင့်ချိန်းချက်သောစာရင်းစစ်များကမည်သည့်အချိန်တွင်မစစ်ဆေးရေးအတွက်ဖွင့်ကြသည်။
တစ်ဦးက (Non-ကုသိုလ်ဖြစ်) ပုဂ္ဂလိကအခြေခံအုတ်မြစ် Labuan အတွက်အောက်ပါအခွန်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်:
•အကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကို 3% သို့မဟုတ် 20,000 RM (လက်ရှိခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $ 6,600 အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ၏ပြားချပ်ချပ်အခကြေးငွေများ၏ငွေပေးချေမှုဖြစ်ပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များမှဝင်ငွေသည် ဖြစ်. ,
•အကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကို 24% ဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားအတွင်းရရှိခဲ့ဝင်ငွေခွန်;
•ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတစ်ဦးကိုင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ဆင်းသက်လာဝင်ငွေများအတွက်ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကို 0% ရှိ၏
•အကျိုးစီးပွားအခွန်ရှောင်, မူပိုင်ကြေး, သို့မဟုတ်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများမှအမြတ်အစွန်းများဖြန့်ဖြူးမအခွန်အခများရှိပါတယ်။
မှတ်ချက်: အမေရိကန်အခွန်ထမ်းနှင့်၎င်းတို့၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအပေါ်ဝင်ငွေအခွန်မှဘာသာရပ်အားလုံးအခြားသူများကိုသူတို့၏အစိုးရများ '' အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
•အရာရှိ (s) ကိုက resolution ကို၏ကျမ်းပိုဒ်အခြေခံအုတ်မြစ်မကြာမီသက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်အချိန်အတိအကျကာလအဘို့တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်ကြောင့်၎င်း,
တည်ထောင်သူ, ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များ, အရာရှိများ, အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ, သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖော်ထုတ်မျှအများပြည်သူဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပဋိညာဉ်စာတမ်းမဆောင်းပါးများကိုမမှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်အတူတင်သွင်းနေကြသည်။
တစ်ဦးက Labuan Foundation မှအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်ပင်: စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားပါဝင်မှု, privacy ကိုမြန်ဆန်ဖွဲ့စည်းခြင်း, အနိမ့်အခွန်များ, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, နှင့်အင်္ဂလိပ်ယင်း၏အရာရှိတဦးကဘာသာစကားများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။